Filtrer les éléments par date : dimanche, 15 décembre 2019
dimanche, 15 décembre 2019 20:22
Bisikileta – « Tour de Madagascar »: Tompondakan’ny andiany faha-15 i Rakotoarivony Mazoni
Fihodinana in-telopolo ny farihin’Anosy amin’ny halaviran-dalana 90km no namarana ny « Tour de Madagascar » amin’ny hazakazaka am-bisikilety andiany faha-15 androany.
Voahosotra ho tompondaka tamin’ity andiany ity Rakotoarivony Mazoni ka nosalorana ny akanjo mavo. Ny ekipan'ny BOA Madagasikara ihany koa no nibata ny amboara teo amin'ny filaharana isam-bondrona.
I Amedé Houlder, 19 taona, teratany Malagasy no zandriny indrindra tamin'ireo mpandray anjara.
Any Toliara no hiainga ny « Tour de Madagascar » andiany faha-16 amin'ny taona 2020.
dimanche, 15 décembre 2019 20:15
Mahajanga: Vazaha lahy mpanao gazety naratra notifirin’ny jiolahy
Naratra notifirin’ny jiolahy, tao Mahajanga ny harivan’ny sabotsy 14 desambra 2019, i Patrick Millan, mpanao gazety sady tonian’ny vondrona Kwezi (Kwezi TV sy France Mayotte matin) atsy amin’ny nosy Mayotte.
Teo ampisakafoanana hariva ny ankohonany no nisy jiolahy roa mitam-basy tafiditra tao an-tranony handroba. Raikitra ny sakoroka, nitifitra ny jiolahy, ary voa teo amin’ny tanany sy ny tratrany i Patrick Millan raha nanakana ny basin'ilay jiolahy tsy hipoaka. Nitsoaka ireo olon-dratsy taorian’izay.
Tsy misy ahiana ny ain’i Patrick Millan saingy voa mafy ny tanany, ary mety hiazo an’i Frantsa izy hitsabo tena.
dimanche, 15 décembre 2019 20:13
SAMVA: Haverina amin’ny CUA, nomena fiarabe mpitatitra fako miisa 35 sy daba-pako 175
Notoloran’ny fanjakana fiarabe mpitatitra fako miisa 35 sy daba-pako miisa 175 ny SAMVA (Service Autonome de l'Assainissement de la Ville d'Antananarivo). Natao ny sabotsy 14 desambra 2019, tetsy an-tokontanin’ny lapan’ny kolontsaina sy fanatanjahantena Mahamasina ny lanonana manamarika izany.
Nilaza ny filoha Andry Rajoelina fa santatry ny hamerenana ny SAMVA ho eo amin'ny Fiadidiana ny tanànan’Antananarivo (CUA) izao, raha nesorina ny taona 2008.
Nohamafisiny koa fa « hanolotra 50 lavitrisa Ariary ho an'Iarivo ny fanjakana Foibe hanarenana ny tanàna ».
dimanche, 15 décembre 2019 19:10
Maharante Jean De Dieu: Lasibatry ny « sonia halatra » namoaham-bola tao amin’ny ARTEC
Nanao fanambarana lava ao amin’ny pejiny facebook i Maharante Jean De Dieu, minisitry ny paositra sy ny fifandraisan-davitra ary ny fampivoarana ny haitao ara-kajy mirindra tamin’ny fitondrana Hery Rajaonarimampianina, mikasika ny vola 6 miliara Ariary tao amin’ny ARTEC (Autorité de Régulation des Technologies de Communication) iampangana azy taorian’ny fanadiadiana nataon’ny IGE (Inspection Générale de l'Etat).
« Gaga », aho hoy i Maharante satria « tsy mandalo teo imasoko ny atontan-taratasy mikasika vola tsy toko sy forohana izany ». « Nivarahontsana ny tenako sy ny fanahiko, ka hany hery dia nikisaka aloha naka saina ». Any amin’ny zanany any Paris, Frantsa ny tenany amin’izao fotoana izao, araka ny ambarany.
dimanche, 15 décembre 2019 15:14
Clémence Botino: Voahosotra ho « Miss France 2020 »
« Miss Guadeloupe » i Clémence Botino, izy no voahosotra ho « Miss France 2020 » nandritra ny fifaninana natao tao Marseille ny sabotsy 14 desambra.
Clémence Botino no mandimby an’i Vaimalama Chaves « Miss Tahiti » tompon’ny anaram-boninahitra tamin’ny 2019.
22 taona i Clémence Botino, mpianatra amin’ny lalampiofanana « Master Histoire de l'art » ao amin’ny oniversiten’i Sorbonne any Frantsa izy.
Clémence Botino no « Miss France » faha-90 tamin’ny tantaran’ity fifaninanana hatsaran-tarehy amam-bika any Frantsa ity.
dimanche, 15 décembre 2019 14:58
15 décembre: Journée internationale du thé.
dimanche, 15 décembre 2019 14:55
15 décembre: Journée [universelle] de l’espéranto
15 décembre: Journée [universelle] de l’espéranto.
dimanche, 15 décembre 2019 14:53
Magro Behoririka: Ambohimpihaonan’ireo mitaky ny fahamarinana sy ny hampanjakana ny ara-dalàna
Nifamotoana teo amin’ny Magro Behoririka ny sabotsy 14 desambra 2019, ireo olomboafidy, filohan’antoko, sendikalista, mpiasa, olom-pirenena tsotra niray feo mitaky ny fampitahana ny lisi-pifidianana nampiasaina tamin'ny fifidianana solombavambahoaka tamin’ny 27 mey 2019 sy izay nampiasaina tamin'ny Ben'ny tanàna sy ny mpanolotsaina ny 27 novambra 2019.
« Tolona Iombonana ho an'ny Marina » no iarahan'ny rehetra amin'izao fotoana. Manaitra ireo filoham-piangonana ihany koa ireo mpitarika teo amin’ny Magro mba « hijoro » fa « mikasa hampandany lalàna mampifototra ny mpiara-belona amin'ny fanambadian'ny lahy samy lahy, na vavy samy vavy » ny mpitondra amin'izao fotoana.